Sida Looga Gudbo Furriinka Naxdinta Leh | Bezzia
Maria Jose Roldan | 11/10/2021 22:37 | Xiriirka
Furriinku wuxuu u ekaan karaa geeri iyo sida oo kale, Waa inaad soo martaa habka murugada si aad uga gudubto dhibaatadaas oo kale. Waa sagootintii ugu dambaysay ee nolosha riyooyinka iyo mustaqbalka qofka aad jeceshahay. Taasi waa sababta furriinku u noqon karto dhaawac dhab ah dad badan.
Maqaalka soo socda waxaan kuu sheegi doonaa sida looga gudbo murugada furriinka iyo inay awoodaan inay ku bilaabaan nolol cusub sidan.
Waa inaad ka bilowdaa salka, in laba furiin aysan isku mid ahayn sababahana ay noqon karaan kuwo badan oo kala duwan. Marka la samaynayo go'aan sidan u adag, waxaa wanaagsan in la raaco talooyin taxane ah oo ka dhigaya habka kala go'a qofka la jecel yahay mid aad u adkaysan kara:
Ugu horrayn oo waxa ugu muhiimsan waa aqbalidda furriinka. Waa wax iska caadi ah oo caadi ah in marka hore ay kharash ku baxdo, maadaama ay ka dhigan tahay in laga tanaasulo riyooyinkii iyo qorshayaashii aan mar dambe la fulin doonin. Haddii aan wax la hagaajin karin, waxtar ma leh inaadan aqbalin xaqiiqda. In kasta oo ay adkaan karto oo naxdin badan tahay, haddana waxaa habboon in la aqbalo furriinka oo aan arrimaha sii murgin.
Qofku waa inuusan gooni isu soocin oo uu isku dayo inuu noloshiisa dib u dhiso. Markaad la kulanto waqtiyadan adag, waxaa lagugula talinayaa inaad naftaada ku hareeraysid dad u dhow inay awoodaan inay muujiyaan shucuur iyo dareeno kala duwan.
In kasta oo ay suurtogal tahay inaysan suurtagal ahayn, haddana waa muhiim inaad hore u fiiriso iyo arag nolosha leh rajada ugu weyn ee suurtogalka ah. Markii uu waqtigu sii socdo, riyooyin iyo qorshayaal cusub ayaa soo bixi doona xitaa haddii qofka aad jeceshahay uusan joogin.
Way fiicantahay in wax laga barto khaladaadka la galay si mar kale nolosha loogu raaxeeyo. Waayo -aragnimadu waa shahaado waana inaad ka heshaa dhinaca togan furriinka.
Si aad u faraxdo uma baahnid inaad yeelato lamaane aad la wadaagto dareenkan oo kale. Waa inaad taqaanaa sida loo barto inaad keligaa noqoto oo aadan ku tiirsanayn qof kale marka laga hadlayo helitaanka farxadda.
Haddii in kasta oo la yiri, weli aadan ka guuleysan furiinka, ma aha fikrad xun inaad caawimaad ka raadsato xirfadle. Qofka sida cilmi -nafsiga oo kale ah ayaa kaa caawin kara maareynta shucuurta kala duwan. Waqtiga aad awooddo inaad ka gudubto daqiiqad aad u adag sida furitaanka qofka aad jeceshahay, waxaa lama huraan ah in la ogaado sida mar walba loo socodsiiyo shucuurta kala duwan.
Gaaban, Ma aha wax sahlan ama fudud in laga gudbo furriinka qof aad jaceyl tihiin. Waxaa muhiim ah in la ogaado sababta xiriirku u kala go'ayo oo laga bilaabo halkan, samee wax kasta oo suurtogal ah si hanaanka murugadu uusan u dheeraan. Waxaa jira dad badan oo furriinka u rogaa jug dhab ah oo ay aad u adag tahay in laga baxo. Xaaladaha qaarkood, qofku ma awoodo inuu ka adkaado furriinka kaligiis waxaana lagu khasbaa inuu caawimaad ka raadsado xirfadle si uu uga caawiyo inay ka gudbaan marxalad adag sida inay kala tagaan lamaanahooda weligood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Sida looga gudbo furriinka naxdinta leh